Waxaan joogaa Toronto anigoo ka qayb galaya shirkii Uberflip ee Khibrada Waxyaalaha. Maanta, waxaan maalin ku qaadnaa xarunta quruxda badan ee Uberflip waxaanan dhageysanay qaar ka mid ah hadalladii waaweynaa. Hal kulan oo saameyn weyn igu yeeshay wuxuu ahaa Agaasimaha ABf Snowflake, Daniel G. Day, oo ka hadlaya sida uu u soo saaray barnaamij ABM ah oo cirka isku shareeray natiijooyinka iibka Snowflake. @uberfliphq qaybta qulqulka #CONEX waa boodboodayaa! HQ qurux badan halkan #Toronto #torontotech Qoraal ay wadaagaan Douglas Karr (@khadar_mahad)
Erin Sparks waxay maamushaa Edge-ka raadiyaha Webka, Podcast-ka aan kafaala-qaadno kana qayb-galno toddobaad kasta. Erin iyo anigu waxaan noqonay saaxiibo wanaagsan sanadihii la soo dhaafay waxaanan yeelanay dood yaab leh toddobaadkan. Waxaan ka hadlayey ebook soo socda oo aan u qoray Meltwater oo dhowaan la daabici doono. Buug-gacmeedka, waxaan si faahfaahsan ugu faahfaahinayaa caqabadda ka jirta horumarinta istiraatiijiyad suuq-geyn iyo cabbiraadda natiijooyinkeeda. Hal fikrad taasi waa